Ihashe lase-Oldenburg, lelona linamandla kwiimfazwe zemfazwe zaseJamani | Amahashe eNoti
UJenny monge | | Amahashe
Amahashe ase-Oldenburg, ekwabizwa ngokuba yi-Oldenburg, are Igazi elifudumeleyo lilingana ukusuka emantla ntshona eSaxony, eyayisakuba yiGrand Duchy yaseOldenburg.
Umgaqo-siseko onzima wohlobo lwase-Oldenburg, uzenzile ezi equines ikhona kwiimfazwe ezininzi. Ihashe ebelikho Efanelekileyo njengehashe lokuhamba kwaye ekuhambeni kwexesha wazuza udumo njengehashe lesali. Yi-equine eguquguqukayo kakhulu, ebonakala kukhuphiswano lwamahashe ahlukeneyo, esiza kuthetha ngalo kamva.
Imbali yehashe lase-Oldenburg iqala ebutsheni benkulungwane ye-XNUMX. Inkqubo ye- udumo kunye nodumo lokuba le equine ifunyenwe kuyo yonke iYurophu, ubukhulu becala kungenxa yokubala u-Anton Günter von Oldenburg. U-Bala, ukongeza ekubeni ngumkhweli wehashe odumileyo, wayengumkhuseli omkhulu wolu hlobo lwamahashe aseJamani.
I-Oldemburg, nkqu nakwiindawo ezishushu, inesitayile esicacisayo, esimnandi kakhulu sokumiswa. Ukongeza, umgangatho wokuhamba, wokunyathela okanye wokunyathela ulunge kakhulu.
2 Incinci yenu imbali
2.1 Ukuqala kohlobo
2.2 Utshintsho olukhulu kugqatso
2.3 I-Oldenburg yanamhlanje
Ngokuphakamisa phakathi kwama-160 nama-172 cm phezulu ekubuneni, ithathwa njengenye yezona ntlobo zinkulu zamahashe zaseJamani.
Own a ngqo intloko iprofayile ethe kratya kwaye isekwe kwi intamo ende eshinyeneyo. Amagxa akhe anezihlunu kakhulu kwaye isifuba sakhe sikhulu kakhulu. Banomqolo owomeleleyo kunye no ubunzulu obukhulu be-lomar. Babo imilenze imfutshane kunye neehaki ezilungiswe kakuhle.
Phakathi I-Oldenburg yangoku, imilenze emide kunye nokubonisa okukhulu kwiintloko.
Nangona idyasi yayo inokuvuma imibala eyahlukileyo, eyona ixhaphakileyo kukufumana Umdaka, mnyama, chestnut kunye namaqunube amaqunube.
Ngokubhekisele kubalinganiswa, zizilwanyana I-docile kodwa inomdla wokuba nobuganga. Ukongeza, zilingana loo nto bakhula ngokukhawuleza okukhulu kwaye bayabonisa uthembekile kakhulu kubagcini nakubanini bazo.
I-Oldenburg yanamhlanje, inokubonwa ngophawu luka "O" nangaphezulu kwesithsaba, esilungiswe esinqeni sasekhohlo.
Amahashe awayehlala kwingingqi ye-Oldenburg ngaphambi kwenkulungwane yeshumi elinesixhenxe ayemancinci kwaye ethe tyaba, kodwa bomelele ngokwaneleyo ukuba basebenze umhlaba onzima wonxweme lwaseFrisian.
Omnye wabokuqala ukubonisa umdla wokufuya amahashe kuloo ndawo ithile, ibiyiyo Bala uJohann XVI, abathenga uFrederiksborgers waseDenmark, amahashe aseTurkey acokisekileyo, amahashe amakhulu aseNeapolitan, kunye namahashe aseAndalusi. Umlandeli wakhe, owayesele emiselwe u-Count Anton Gunther, wongeze kuwo onke la mahashe alingana kakhulu namaxesha. Kwaye, ukongeza, wenza amahashe afumaneka kubaqeshi bakhe.
Ixesha elingaphezulu i-Oldenburg equines yaba ngamahashe obutofotofo ngenxa yenqwelomoya, iinqwelomoya. Ngaphandle koko, zazingumlinganiso ogqwesileyo womsebenzi wasefama.
Kukho amaxesha amathathu abalulekileyo ukuba kufuneka sigqamise kwimbali yolu hlobo njengoko banegalelo ekubumbeni. Vula Ngo-1820, i-Oldenburg stallion yavunywa okokuqala. Vula Ngo-1861, olu hlobo lwaziswa kwi-registry Inzala yaseJamani. Kwaye okokugqibela, ngo-1923, incwadi yokufunda ngamahashe yase-Oldenburg kunye nencwadi yokufunda yase-Ostfriesen equine yadityaniswa kwaye Umbutho wabafuyi bamahashe ase-Oldenburg wasekwa yanamhlanje.
Utshintsho olukhulu kugqatso
Ihashe lase-Oldeburg, njengesiqhelo kwiintlobo ezininzi, Utshintshe ngeendlela ezahlukeneyo echibini lembali yayo. Olu tshintsho lumkhokelele ekubeni abe luhlobo esinokuthi siluxabise namhlanje. Ezi equines zaba ithathwa njengelinye lamahashe afanelekileyo kukhuphiswano lweembaleki kunye namahashe, ngakumbi isambatho kunye ne-attraillados, konke ngenxa yokuphucuka okubonakalayo kweempawu kunye nezakhono ezichaza namhlanje.
Kuyo yonke imbali yayo, uhlobo lweOldenburg lufumene uhlobo oluchukumisayo lwemfuzo. Iintlobo ezinje ngeNeapolitans, iAndalusians, iBerbers, iCleveland Bay, iNormans kunye neToroughbreds, babumba iOldenburgs.
Olu hlobo lwakhiwe kwisiseko esenziwe ngeemazi zasefama kunye neenqwelomoya ezenzelwe yonke into.
Uhlobo lwalunokusetyenziswa okuninzi: ihashe lokuhamba, ihashe lokudubula, ihashe lasefama. Nangona kunjalo ngokufika koomatshini, kwiminyaka yamashumi amahlanu anamashumi amathandathu, bathatyathelwe indawo yimisebenzi ebebeyenza. Isidingo samahashe okuhamba sasincitshiswe kakhulu kwinkulungwane yama-XNUMX. Nangona kunjalo, Ukwanda kokonwaba kunye nokuzonwabisa kukhokelele kubazalisi beOldenburg ukuba batshintshe icala lendidi. Bazamile ukuza namahashe abakhweleyo aya kuba nodumo olufanayo nolwamahashe abo. Iminqamlezo enesiNgesi esigqibeleleyo noNorman, banike njenge okukhokelela kwisilinganisi esinexabiso eliphezulu.
Itekhnoloji yokusasaza ngokungeyonyani kunye nokuqhubela phambili kwakuthetha ukuba iihalloni akufuneki zibekhona ukuze zibe yinxalenye yoluhlobo. Oku kubangele ukuba i-Oldenburg iqhubeke notshintsho.
Kuwo wonke lo mxube wemfuza, ayimangalisi into yokuba uhlobo lube lolona lupheleleyo. Bazi Iipakethe eziphambili zehashe, Ikwadlala ngokuqaphelekayo umsebenzi wezolimo, thwala uluhlu lwe iinqwelo zamahasheKwaye, njengoko besesitshilo ngaphambili, bayagqatso kukhuphiswano lweembaleki kunye namahashe.
I-Oldenburg yanamhlanje, ikhetha iinkunzi zamahashe kunye nemazi yehashe yokuqhubekeka kohlobo, ngokusekwe kumgangatho wabo wokunxiba kunye nokuxhuma kwamahashe. Ngaphezu koko, amahashe ase-Oldenburg akhuphisane kwiDressage kwiiOlimpiki.
Umbutho waseOldenburg okanye weVerband uvumile Ngaphezu kwamahashe angama-220 kunye nama-7000 mares, ukongeza kwezo ziyinxalenye ekhethekileyo yenkqubo yokuzala kwakhona. Oku kwenza ukuba incwadi ye-Oldenburg ibe yenye yezona zikhulu eJamani.
I-Oldenburg Verband ine motto "Umgangatho kuphela komgangatho obalulekileyo". Oku sele kuthetha nathi ngokukhangela ukugqwesa kohlobo. Oku kuyabonakala nakumxube omkhulu wemfuza onawo la ma-equine.
Babeka ugxininiso olukhethekileyo kwiimayile, Eminye yayo ibuyela emva kookhokho base-Alt-Oldenburg.
Ukongeza, yonke ikwindla, umbutho ubhiyozela "Iintsuku zestallion" eVechta, apho kuvavanywa khona iihashe ezincinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amahashe kaNoti » Amahashe » Ihashe lase-Oldenburg, lelona linamandla kwiimvubu zomkhosi zaseJamani